आफैं व्यवसायी बन्न चाहनुहुन्छ ? यी हुन् थोरै लगानीमा सुरु गर्न सकिने ५ व्यवसाय « Mero LifeStyle
आफैं व्यवसायी बन्न चाहनुहुन्छ ? यी हुन् थोरै लगानीमा सुरु गर्न सकिने ५ व्यवसाय
सुमित्रा लुईंटेल	|| 12 August, 2021
धेरैलाई आफैं केही व्यवसाय गरौं भन्ने चाहना हुन्छ । तर, व्यवसाय सुरु गर्न भनेजस्तो सजिलो कहाँ छ र ! कुनै व्यवसायका बारेमा सोच्ने बित्तिकै त्यहाँ लगानीको कुरा आइहाल्छ । यसैको अभावमा थुप्रै नेपाली युवा बेरोजगार छन् । यस्तै, अर्को समस्या भनेको दुविधा पनि हो । व्यवसाय सुरु गरेपछि चल्ने हो कि होइन, कतै लगानी डुब्ने पो हो कि भन्ने दुबिधाले पनि सताइरहेको हुन्छ । तर, कतिपय व्यवसाय यस्ता छन् जसमा लगानी गरेर घाटामा जाने सम्भावना पनि कम हुने र लगानी पनि थोरै गरेपुग्छ । तिनै व्यवसायहरुको बारेमा यहाँ चर्चा गरिएको छ :
अहिले कोरोना महामारीमा मास्कको प्रयोग अनिवार्य भएकोले यसको व्यापार एकदमै फस्टाएको छ । कोरोना माहामारी भन्दा अघि मास्कको त्यति धेरै प्रयोग हुँदैन थियो । विशेषगरी मास्क विदेशबाट आयात हुन्थ्यो, तर अहिले नेपालमै प्रशस्त मास्क उत्पादन हुन थालेका छन् । त्यसैले यसको उत्पादनलाई व्यवसाय बनाउँदा कम लगानीमा धेरै नाफा निकाल्न सकिन्छ ।
मास्क बनाउनको लागि प्रयोग हुने मेसिन ३० देखि ३५ हजार रुपैयाँमा पाइन्छ । जसलाई ‘एयर लोप मेसिन ल’ भन्निछ । यो मेसिन चलाउनको लागि एउटा एयर कम्पे्रसर चाहिन्छ । जसको मुल्य नेपाली बजारमा १० देखि १५ हजार पर्छ । त्यसैले ४५ देखि ५० हजार भित्र मास्क बनाउने मेसिन प्राप्त गर्न सकिन्छ ।
मास्क बनाउनको लागि प्रयोग हुने मेसिन ३० देखि ३५ हजार रुपैयाँमा पाइन्छ । जसलाई ‘एयर लोप मेसिन ल’ भन्निछ । यो मेसिन चलाउनको लागि एउटा एयर कम्पे्रसर चाहिन्छ । जसको मुल्य नेपाली बजारमा १० देखि १५ हजार पर्छ । त्यसैले ४५ देखि ५० हजार भित्र मास्क बनाउने मेसिन प्राप्त गर्न सकिन्छ । मास्क बनाउन प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ मास्क ब्यान्क र लुपको खर्च १० देखि १५ हजार यसरी लगभग ६० हजारको लगानीमा मास्क बनाउने व्यवसाय सुरु गर्न सकिन्छ ।
चाउमिन बनाउने व्यवसाय पनि थोरै लगानीबाट सुरु गर्न सकिन्छ । छोटो समयमा तयार गरेर बेच्न सकिने खानेकुरा मध्ये चाउमिन पनि पर्छ । त्यसैले यसको व्यवसाय सुरु गर्नु पनि आम्दानी गर्ने एउटा राम्रो उपाय हो ।
यसका लागि चाउमिन बनाउने मेसिनमा लगानी लाग्छ । चाउमिन बनाउने अटोसेमि मेसिन जसमा मिक्चर, कटिङ्ग मेसिन र स्टिमर समावेस हुन्छन् । जसको मुल्य २ लाख रुपैयाँसम्म पर्न आउँछ । यो मेसिन एकपटक किनिसकेपछि त्यति खर्च भने हुँदैन । मैदाको पीठो र प्याकिङका सामग्री मात्र किने पुग्छ ।
प्लास्टिकको प्रयोगले वातावरणमा असर पर्छ भन्ने कुरा बुझेका थुप्रै व्यक्तिहरूले कागज र कपडाका झोला बोक्न सुरु गरिसकेका छन् । प्लास्टिकको दाँजोमा लामो समयसम्म टिक्ने भएकाले पनि यस्ता झोलाको सम्भावना धेरै छ । कागज र कपडाबाट बनेका झोलामा खाद्य सामाग्री, फलफूल, तरकारी, कपडा, जुत्ता, गहना आदि राख्न मिल्ने भएकाले आजकाल साना तथा ठूला पसल र मार्टहरूमा पनि यसको व्यापार हुने गरेको छ ।
साइज कटिङ मेसिन, अल्ट्रा सोनिक सिलिङ मेसिन, पन्चिङ मेसिन र कम्प्रेसर चाहिन्छ । कच्चा पदार्थको रुपमा नन ओबन फेब्रिकको कच्चा पदार्थबाट यो झोला बन्छ । यसका लागि ३ लाख देखि ५ लाखसम्म लगानी लाग्छ ।
लुगा धुने झोल साबुन, भाडा धुने झोल साबुन, हार्पिक, फिनेल आदि उत्पादन गर्ने व्यवसाय पनि थोरै लगानीबाटै सुरु गर्न सकिन्छ । यदि सम्भावनाको हिसाबले हेर्ने हो भने सरसफाइका समानहरु जुनसुकै ठाउँमा सदाबहार चलिरहने आइटम हुन् । नेपाली बजारमा लुगा धुने झोल साबुन र भाडा धुने झोल साबुन जस्ता समानहरु भित्रिन थालेको खासै धेरै समय पनि भएको छैन ।
सप केक ले भन्दा लिक्विड सपले लुगा धुन र भाडा धुन सजिलो हुने भएकोले यस्ता झोल साबुनहरु ग्राहकको रोजाईमा पर्न थालेका छन् । यो व्यवसाय सुरु गर्नको लागि लिक्विड साबुन बनाउने एटोमेटीक लिक्विड फिलिङ मेसिनको आवश्यकता पर्छ । जसको मुल्य १ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म पर्छ ।
सप केक ले भन्दा लिक्विड सपले लुगा धुन र भाडा धुन सजिलो हुने भएकोले यस्ता झोल साबुनहरु ग्राहकको रोजाईमा पर्न थालेका छन् । यो व्यवसाय सुरु गर्नको लागि लिक्विड साबुन बनाउने एटोमेटीक लिक्विड फिलिङ मेसिनको आवश्यकता पर्छ । जसको मुल्य १ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म पर्छ । लिक्विड साबुन बनाउने फर्मुला र केमिकलको लागि पनि थोरै लगानी लाग्छ । ग्राहकको मागलाई मध्यनजर गर्दै डिमाण्ड अनुसारका सामानहरु उत्पादन गरेर मार्केटमा थोरै मेहनत गर्दा यसबाट मनग्य आम्दानी गर्न सकिन्छ ।
थोरै लगानीमा नै सुरु गर्न सकिने अर्को व्यवसायहरुमा अगरबत्ती पनि हो । अगरबत्ति पनि सदाबाहार बिक्री हुने सामानमा पर्छ । यो बनाउनका लागि मेसिन बाँसको सुइरा र अगरबत्ति प्रिमिक्स पाउडरको आवश्यकता पर्छ । अगरबत्ती बनाउने सेमि अटोमेटिक मेसिनलाई ३ लाख रुपैयाँ पर्छ । अगरबत्ती बनाउन आवश्यक कच्चा पदार्थको भने ५ देखि १० हजार लगानी लाग्छ ।
निषेधाज्ञामा थप कडाई– पसल साँझ ७ बजेसम्म र सवारीसाधन बेलुका ८ बजेसम्म मात्र चलाउन पाइने
[…] कुराकानीमा आधारित)यो पनि पढनुहोस् ।आफैं व्यवसायी बन्न चाहनुहुन्छ ? यी हुन…बैंकबाट कर्जा लिएर घर बनाउने सोचमा […]